4 Koorsooyin Degdeg ah | Agile Scrum Master Certification «ITS Training
Muuqaalka Window Server 2016
CSI Isku-Duwaha CSI
Nabadgalyada BlueCat iyo Hagaajinta Sare
ArcSight Logger iyo Hawlgallada
HP ArcSight ESM 6.9 Security Manager
Hubi Maamulaha Nabadgelyada Soodhawrka ah R80
Calaamadee Khabiirka Nabadgalyada Nabadgalyada (CCSE)
Cyberoam Certified Network & Khabiirka Amniga
Shabakadda La Xiriira Shabakada & Nabadgelyada (CyNSP)
Tran Micro Scan Security Security
Tijaabinta Iskuduwidda Xafiiska Miisaanka
Koorsada Maamulaha TRITON AP-DATA
Koorsada TRITON AP-EMAIL Maamulaha
Tababarka soo socda
4 Koorsooyin Degdeg ah | Agile iyo Certum Master Certification
Posted BySolutions Technologies Innovative
Shahaadooyinka ee Scrum, habka ugu weyn ee horumarinta barnaamijka Agile
Agile Scrum Master Koorsada Tababarka
1. Master Master Scrant
Maxay yihiin faa'iidooyinka ka mid ah xaqiijinta ScrumMaster?
Tilmaamaha loogu talagalay xaqiijinta ScrumMaster
Maxaad samaynaysaa markaad hesho shahaadada CSM-ka?
2. Maareynta Mashruuca Agile - Dhaqtarka
3. Maareynta mashruuca agile
4. Agile iyo Scrum
Diyaarinta Qorsheynta iyo Shahaadooyinka waxay ku qancinaysaa aragtida qoraalka Agile adoo dhiirigalinaya dadaal isku dhafan, faa'iido leh, iyo karti-xirfadeedka dhexdooda. Horumarka caalamiga ah wuxuu isbeddelayaa ururrada, wuxuuna qaadaa qadar sare oo ah dil.
Kooxaha "Certified ScrumMaster® Certified Certified Certified" waxay si sharci ah u isticmaalaan xawaaraha, hagaajinta suurtogalnimada guulaha guud ee ganacsiga. CSMs waxay fahmayaan sifooyinka, dhaqanka, iyo codsiyada waxayna siiyaan heer xog ah iyo karti leh si ka baxsan madaxdooda caadiga ah. CSMs waxay u tagaan sidii "hireeling pioners", oo ka caawinaya wax kasta oo ka taga wada shaqeynta Scrum oo wadajirta qaab dhismeedka Scrum. CSMs waxay sidoo kale ka ilaaliyaan kooxda labadaba gudaha iyo dibedda. Waxaa laga faa'iideyaa wax badan oo ku saabsan qaybta "ScrumMaster" oo aad aragto kiis ka mid ah qorshaha ScrumMaster.
Adiga oo soo iibsanaya Certified ScrumMaster® xaqiijin:
Horumarin xirfadahaaga furfuran adigoo ku hartay wax-soo-saarka iyo soo-jiidashada dhammaan goobaha warshadaha ee hirgelinta dhaqanka Agile.
Bandhig ganacsiyada iyo saaxiibbadaada guulahaaga ee bartamaha Dugsiga barashada.
Qaado hannaanka xakamaynta iyo xaddiga qaybta "Certified ScrumMaster" ee ka soo jeeda shakhsiyaadka ugu fiican ee lagu magacaabo Scrum.
Ku soo qaado koox ka mid ah xirfadleyda isweydiinta leh ee isha ku haya isbedelka joogtada ah.
Sida CSM, waxaad awood u yeelan doontaa inaad buuxiso qaybta ka midka ah saaxiibtinimada ScrumMaster ama Scrum. Marka la eego habka loo yaqaan 'confirmation', waxaad fahmi doontaa fahamka nidaamka Scrum, oo ay ku jiraan qaybaha kooxda, laylinta, iyo curios.
Aqoonsigaaga CSM-da, waxaad sidoo kale u dhigan doontaa fasax ku-qoridda 2-sanadeedka Isbahaysiga Scrum. Ka qayb qaadashadan waxaad ku biiri kartaa rucubyada macmiilaha ee xaafadda, ururada aan tooska ahayn, helitaanka lacag-bixin ballaaran oo ku saabsan dhacdooyinka bulshada, iyo qayb dheeraad ah oo hanti ah. Intaa waxaa dheer, CSMs waxay isticmaali karaan calaamad gaar ah si ay u muujiso shahaadooyinkooda.
Si aad ugu guulaysatid shahaadada CSM, waa inaad ka qaadataa koorso CSM ah oo ka socda Tababaraha Sameeya (Certified Scrum Trainer) (CST) ama Tababaraha Qaadacsan (EST).
Hadafka ugu horeeya ee CSM-gaaga ayaa ah inaad is-bar-bardhigto isku-xigta. Waxaanu amar ku bixiyay khasaare hantida oo kaa caawin kara inaad fahamto sida uu u socdo isbeddelka caalamiga ah.
Waqtigan xaadirka ah waji wejiga ah, laba maalmood (saacad 16) kooras CSM ah oo uu ku hagayo Tababaraha Iskaashatada Isugeynta ee Scrum Alliance. Kadib marka si wax ku ool ah loo dhammeeyo koorsada, waa inaad ku aflaxdaa imtixaanka CSM. Si aad u hesho dhibcaha gudbinta, waa inaad si sax ah uga jawaabtaa 24 ee su'aalaha 35. Waxaad u qalantaa dugsiga 16 Scrum Education Units oo aan dhamaad lahayn ee koorsadan.
Ka dib markaad ka gudubto imtixaanka CSM, waxaa lagaa codsan doonaa inaad qirto Heshiiska Liisanka iyo dhamaystirto Qaybta Is-qorista Isugeynta ee Scrum Alliance.
Helitaanka in uu ahaado Agile waa dalxiis dheer soconaya. Isu-geynta jaangooyooyinka Scrumka iyo dhaqamada ee adduunkaaga shaqo waxay qaadataa adkeysi, dulqaad, iyo ballan-qaad aan is-beddelin. Intaa waxaa dheer sii wanaajinta aragtidaada iyo qaababkaaga:
Ku biirida macmiilka.
Kala soocista khibradaada kooxda Isbahaysiga ee Isku-dhafka ee Scrum Alliance iyagoo ka qaybqaagaya maqaalkeena boggayaga.
Tagitaanka Ururada Alliance Alliance.
Ka qayb gelida kooxda CSM LinkedIn Group.
Kobcinta fikraddaada jarista jarista Mawduucyada guumada adigoo ku guuleysta Shahaadooyinka Dheeraadka ah.
Ka soo qaad khibrada iyo xirfada si aad u daboosho shahaadada Certified Scrum Professional (CSP).
Naftaada ku fariisiga adoo u sheegaya dadka kale wixii ku saabsan guulahaaga shahaadada CSM, calaamadaha CSM, iyo muuqaal firfircooni leh, bogsashadda bogga Iskoolka Scrum.
APLI-International AgilePM® macnaheedu waa in ay wax ka qabato baahida kuwa ka shaqeynaya deegaan jihaad ah oo u baahan in ay noqdaan kuwo agile ah.
In la isku xiro iswaafajinta habka loo soo bandhigay ee khibrad la taaban karo leh.
Tilmaameedka AgilePM, oo la abuuray iskaashatada Agile Business Consortium, ayaa bixiya hoos u dhaca dhulka iyo qaabsocodka soo noqnoqda ee keenaya is-waafajin udhexeeya isweydaarsiga, faahfaahinta iyo dareemidda looga baahan yahay maaraynta wanaagsan ee maaraynta, iyo isbedelka degdegga ah, isbeddelka iyo xoojinta lagu bixiyo agile .
Fikradda maaraynta hirgelinta ganacsiga waxay ku saleysan tahay abuurista qorshe si xoog leh loogu xoojiyo kooxo caqli-gal ah si ay uga jawaab-celiyaan is-bedbedelka baahiyaha, iyada oo ay ku hawlan yihiin in ay shaqaaleeyaan iyo awood u yeeshaan dadaal wadajir ah iyo ganacsi.
Waa maxay Maareynta Mashruuca Agile?
"Ka dhig sida ay tahay, maalin walba waannu taagannahay. Waxaan nahay Agile. "
Hal daqiiqo. Ka hor inta aanad u sheegi karin kooxdaada waa mid deg deg ah, waxaa muhiim ah in la fahmo fahamka wanaagsan ee '' Waa maxay khasaarihii '????? iyo maxay? Waa maxay qayb ka mid ah doorka agile ah ????? Maaraynta hirgelinta maareynta agile waa hab loo tixgeliyo habka loo qoondeeyay ee u oggolaato Maareeyayaasha Mashruuca si ay u gudbiyaan shaqo aad u sarreeya waxayna u egyihiin sida dimoqraadiyada ay u wadaagaan lamaanayaashooda. Waa wax aan loo baahneyn in la jaangoyno, qaali iyo qalad u jahwareersan si ay ula macaamilaan maamulka hawleedka, taasoo keentay natiijooyin isku dhafan muddo dheer.
Mashruucyada barnaamijka ayaa had iyo jeer isbedelaya. Marka ay macaamiishu ku tiirsan yihiin si ay u dhammeeyaan shuruudaha kahor intaanay tijaabin karin samaynta moodooyinka, kormeerka iyo muddada gaaban ee loo yaqaan 'deferrals' ayaa inta badan curyaan ah. Mashruuca Mashruuca Agile wuxuu ku saabsan yahay isbedelka xitaa, xiitaa goor dambe ee hagaajinta. Waxay ku saabsantahay arrimo la xidhiidha mabaadii'da ganacsiga ugu wanaagsan ee la bilaabi karo, oo leh xogta joogtada ah si loo hubiyo kharashka, waqtiga iyo heerka.
Maareynta Mashruuca Agile wuxuu yareeyaa tayada badan oo ayadoo la kala soocayo wareegyada wareegyada bilaha ah ee dhismaha waxyaabaha loo baahan yahay oo dhan, dhisida sheyga oo dhan iyo ka dib imtixaankaas si aad u ogaato dhowr waxyaalood oo khaldan. Meelo yar, qaybo la isticmaali karo sheyga wax soo saarka ayaa lagu muujiyay, abuuray oo isku dayay si macquul ah, wareegyo laba-afar usbuuc ah.
Isbeddelka wuxuu bilaabmaa marka maskaxda ku haysa xaaladaha jira ee la sii kordhi karo isbedelka ku yimaada si ay wax uga qabtaan wax kale oo aan la filayn. Inta badan maskaxda iyo xurmeynta caalamka, xaalad kastoo, ma tagi doonto meel kasta oo ka baxsan fursadda aadan u maleynaynin in ay awood u leeyihiin inay noqdaan kuwo deg deg ah. Waxaad u baahan doontaa inaad baratid waxqabad cusub iyo waliba kuwa aan hore u aqoonin si ay ugu fiicnaadaan nidaamka asalka ah, oo ay ka mid yihiin:
Awooda khaaska ah ee cusub, tusaale ahaan, tijaabinta robotization iyo horumarinta qorshaynta
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo looga fekerayo oo u shaqeyn karo koox ahaan
Tilmaamaha si loo sameeyo barnaamijka shaqada ee gudaha jadwalka gaaban
Maadaama geeddi-socodka geedi-socodka uu yahay mid ku filan marka la eego horumarinta barnaamijka caado, u diyaarinta barbarashada goobta waxbaridda ama umeerinta guud ahaan waa loo baahan yahay. Waxa u muuqda sida ugu fiican ee loo shaqeeyo ururrada intooda badani waa qaar asaasiga ah oo isku diyaara, oo diiradda saaraya samaynta diyaar u ah inay isku dayaan Suugaanta iyo fahamka heerarka xaruntooda.
Diyaargarowga guud waxaa caadi ahaan la qabsadaa tijaabada-gaar ahaan diyaarinta ama sharfidda, tusaale ahaan, keenista hormar-kobcinta imtixaanka oo u dhow si ay u shaqeeyaan kooxo ku jira koodhkooda.
Barnaamijka Goose Mountains wuxuu bixiyaa diyaarinta iyo goobta qoob-ka-shaqeysiga si uu kuu caawiyo adiga iyo kooxdaada waxay muujiyaan calaamadaha hagaajinta agile iyo Scrum. Si loo xoojiyo isu diyaarinta, ururradu waa inay bixiyaan furitaanka (wikis, qadada qadada-iyo-barashada, tafaftirka kooxeed) kooxo si loo wadaago xogta.
Shirkadda Microsoft waxay ku dhawaaqday taageerada dariiqa cusub ee daroogada Azure
PHP Mailer Liberaries Waxay dilaan bogga daqiiqad kasta oo aadan akhrin maqaalkan
Noqo A Partner